Laser Golf Rangefinder mpanamboatra, Golf Rangefinder tsara indrindra ho an'ny vidiny | Feyond
Feyond Sports dia afaka mamaly ny filan'ny vondrona mpanjifa isan-karazany amin'ny vokatra kojakoja golf.
Fanampiana amin'ny golf
Home > Products > Laser Golf Rangefinder
Teleskopyo Laser rangefinder golf
Nahoana isika no mila ny Golf Laser Rangefinder? Ny iray amin'ireo zavatra sarotra indrindra refesina rehefa vaovao amin'ny lalao ianao dia ny halavirana. Ary ny iray amin'ireo zavatra sahirana an'ilay "pro taloha" dia ny halavirana. Ny marina dia, isika rehetra dia manana olana amin'ny fanombanana ny halavirana. Fahamarinana ambonimbony kokoa hatramin'ny ± 0.3 yards ao anatin'ny 200 metatra, ireo mpitaingin-tsoavaly Feyond irery ihany no afaka mahatratra io fahamarinana avo lenta io eny amin'ny tsena; Mahitsy hatramin'ny ± 0,55 yard miala amin'ny 200-660yards; Fatra refy amin'ny metatra na metatra; Fomba maro (mode scanning polière, fanitsiana ny hantsana golf, fandrefesana hafainganam-pandeha) Ny halaviran'ny maivana sy malefaka (azo ampidirina am-paosy): habe am-paosy (110 * 65 * 38mm), maivana (164g), kely kokoa sy maivana kokoa noho ny mpanamory hafa bateria lithium CR2 3V maharitra no tafiditra ao: 5000 heny ho azy aorian'ny 8 segondra. Famolavolana casing marefo sy marefo (ABS + PP), ny hafa kosa PP fotsiny, manome antsika traikefa tsara kokoa ny golf rangefinder. Fanamafisana 6x miaraka amin'ny rafitra mifantoka amin'ny halavany HD, monocular mazava, avo lenta; porofon'ny rano sy sahona; Ho marimarina kokoa, ny mpikaroka golf Feyond miaraka amin'ny onitra golf dia mitaky ny halaviran'ny fiakarana na ny fidinana ary aseho miaraka amin'ny halaviran'ny pin, mba hahafahanao misafidy ny klioba havanana ary mamely fahatokisan-tena amin'ny baolina. Ny Advanced Technology Acqu acquisition Technology dia manala ny tsato-kazo avy amin'ny zavatra any aoriana (sampana sy ahitra) miantoka ny fitifiranao ny saina. Ny laharam-pahamehana voalohany dia mety hahatratra ny tanjona voalohany / akaiky indrindra amin'ireo fandrefesana marobe azo, tsy mila miandry mari-pamantarana faharoa, toy ny hovitrovitra. Mora kokoa ny mametraka sy manakalo ny batterie dia mila manosika ny fonony fotsiny, raha oharina amin'ireo golf hafa bateria lithium CR2 3V dia nampidirina, afaka mampiasa farafahakeliny 3000 isa miampy, mandeha ho azy aorian'ny 8 segondra. Fitaovam-pandrefesana maharitra mateza miaraka amina zipper mora idirana mora vidy, tsy mora miovaova endrika, miaro ny mahita ambaratonga tsy hianjera sy hilatsaka. Mora entina, miaraka amin'ny fehy voafono sy clip vy mihantona amin'ny kitapo golf, azo antoka amin'ny fianjerana, mety amin'ny golf, fihazana, tendrombohitra ary fampiasana ivelany, Waterproof. Ahitana fehikibo fehikibo raha te hitondra ny finderanao tsy misy ny kitaponao golf ianao. Ny antsipirian'ny Mini Golf Rangefinder; Range: 600m Loko: (mainty, mena, manga, fotsy, volondavenona, mavokely) Karazan-bateria: 3V, CR2 * 1 Units: M / YD Fahamarinana: ± 0,5m Laser karazana: 905nm Fiarovana amin'ny maso: FDA (CFR 21) Fijery ny saha: 7 ° Fanamafisana: 6X tanjona savaivony: 22mm savaivon'ny mason'ny maso: 16mm fivoahana ny savaivon'ny mpianatra: 3.7mm Dioptera: ± 5D Fomba fanitsiana diopter: fanitsiana ny maso mari-pana miasa: 0 ° c- + 40 ° c Asehoy: LCD Size: 110 * 65 * 38mm Milanja tsy misy bateria (g): 164g MOQ: 1 napetraka
Teleskaopy finday Golf tsara indrindra mahita FactoryPrice-
Nahoana isika no mila ny Golf Laser Rangefinder? Ny iray amin'ireo zavatra sarotra indrindra refesina rehefa vaovao amin'ny lalao ianao dia ny halavirana. Ary ny iray amin'ireo zavatra sahirana an'ilay "pro taloha" dia ny halavirana. Ny marina dia, isika rehetra dia manana olana amin'ny fanombanana ny halavirana. Fahamarinana ambonimbony kokoa hatramin'ny ± 0.3 yards ao anatin'ny 200 metatra, ireo mpitaingin-tsoavaly Feyond irery ihany no afaka mahatratra io fahamarinana avo lenta io eny amin'ny tsena; Mahitsy hatramin'ny ± 0,55 yard miala amin'ny 200-660yards; Fatra refy amin'ny metatra na metatra; Fomba maro (mode scanning polière, fanitsiana ny hantsana golf, fandrefesana hafainganam-pandeha) Ny halaviran'ny maivana sy malefaka (azo ampidirina am-paosy): habe am-paosy (110 * 65 * 38mm), maivana (164g), kely kokoa sy maivana kokoa noho ny mpanamory hafa bateria lithium CR2 3V maharitra no tafiditra ao: 5000 heny ho azy aorian'ny 8 segondra. Famolavolana casing marefo sy marefo (ABS + PP), ny hafa kosa PP fotsiny, manome antsika traikefa tsara kokoa ny golf rangefinder. Fanamafisana 6x miaraka amin'ny rafitra mifantoka amin'ny halavany HD, monocular mazava, avo lenta; porofon'ny rano sy sahona; Ho marimarina kokoa, ny mpikaroka golf Feyond miaraka amin'ny onitra golf dia mitaky ny halaviran'ny fiakarana na ny fidinana ary aseho miaraka amin'ny halaviran'ny pin, mba hahafahanao misafidy ny klioba havanana ary mamely fahatokisan-tena amin'ny baolina. Ny Advanced Technology Acqu acquisition Technology dia manala ny tsato-kazo avy amin'ny zavatra any aoriana (sampana sy ahitra) miantoka ny fitifiranao ny saina. Ny laharam-pahamehana voalohany dia mety hahatratra ny tanjona voalohany / akaiky indrindra amin'ireo fandrefesana marobe azo, tsy mila miandry mari-pamantarana faharoa, toy ny hovitrovitra. Mora kokoa ny mametraka sy manakalo ny batterie dia mila manosika ny fonony fotsiny, raha oharina amin'ireo golf hafa bateria lithium CR2 3V dia nampidirina, afaka mampiasa farafahakeliny 3000 isa miampy, mandeha ho azy aorian'ny 8 segondra. Fitaovam-pandrefesana maharitra mateza miaraka amina zipper mora idirana mora vidy, tsy mora miovaova endrika, miaro ny mahita ambaratonga tsy hianjera sy hilatsaka. Mora entina, miaraka amin'ny fehy voafono sy clip vy mihantona amin'ny kitapo golf, azo antoka amin'ny fianjerana, mety amin'ny golf, fihazana, tendrombohitra ary fampiasana ivelany, Waterproof. Ahitana fehikibo fehikibo raha te hitondra ny finderanao tsy misy ny kitaponao golf ianao. Range: 600m Loko: (mainty, mena, manga, fotsy, volondavenona, mavokely) Karazan-bateria: 3V, CR2 * 1 Units: M / YD Fahamarinana: ± 0,5m Laser karazana: 905nm Fiarovana amin'ny maso: FDA (CFR 21) Fijery ny saha: 7 ° Fanamafisana: 6X tanjona savaivony: 22mm savaivon'ny mason'ny maso: 16mm fivoahana ny savaivon'ny mpianatra: 3.7mm Dioptera: ± 5D Fomba fanitsiana diopter: fanitsiana ny maso mari-pana miasa: 0 ° c- + 40 ° c Asehoy: LCD Size: 110 * 65 * 38mm Milanja tsy misy bateria (g): 164g MOQ: 1 napetraka